Mareykanka oo ka digay qaraxyo Alshabaab ka geystaan Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo ka digay qaraxyo Alshabaab ka geystaan Jabuuti
9th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Jabuuti – Mareeg.com: Wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka ayaa uga digtay muwaadiniinta Mareykanka iney ka feejignaadaan weerarro laga yaabo iney mar kale ka dhacaan dalka Jabuuti oo bishii hore labo qarax ka dhaceen.
Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerararada laga cabsi qabo laga yaabo iney ka dhacaan garoomada diyaaradaha, dekadaha, baararaka iyo goobaha kale ee lagu caweeyo.
Mareykanku wuxuu kula taliyey dadka u dhashay iney ka fogaadaan goobahaas, iyagoo sheegay in weerarrada loo adeegsan karo qaraxyo ay ku jiraan gawaari miineysan.
24-kii bishii May 2014 ayaa nin iyo haweeney isku qarxiyeen baar ay ku badnaayeen reer galbeedka oo ku yaalla caasimadda Jabuuti, lagu magacaabo La Chaumiere, waxaana ku dhintay labadii is qarxiyey iyo qof shaqaale Turki ahaa, halka ay ku dhaawacmeen 15 kale.
Alshabaab ayaa sheegtay qaraxyada ka dhacay baarka Jabuuti, waxaana warbixin ciidamada Jabuuti soo saareen ku sheegeen in labada is qarxiyey ka kala yimaadeen Hargeysa iyo Diridhabe.
Maleeshiyo beeleed la wareegay degmada Marko
Gudoomiyaha Marko: Leygama saarin magaalada